10 Free ihe na-eme Na Paris | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Free ihe na-eme Na Paris
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 24/04/2020)
E nwere ọtụtụ ihe Paris mara maka. Ma Free ihe na-eme na Paris bụ ihe ọ na-mara maka. Ọ bụ ma ama n'ihi ịbụ otu n'ime ihe ndị kasị ihunanya ebe n'ụwa. A ejiji isi obodo na edemede paradise ọbụna! Paris nwere ọtụtụ dị iche iche guises. Na mgbe ihe ngosi nka entry nwere ike ịbụ nkpoda na ịrụ ezi iri na-abịa na a adịchaghị, na French isi obodo nwekwara ike ịbụ a ọnụ ala ụbọchị. -Adịghị kwere anyị? ebe a na- 10 Free ihe na-eme Na Paris!
1. Best Free ihe na-eme Na Paris: Musée Carnavalet
First na m ndepụta 10 Best Free ihe na-eme na Paris bụ Musée Carnavalet. Nke a ngosi nka e mechiri a di na nwunye nke afọ maka renovations, Otú ọ dị, ọ na-eze reopening on December, 20nke 2019! Dị na akụkọ ihe mere eme obi nke Marais, na Carnavalet Museum a raara nye ndị mere Paris. Si ya si malite ka n'oge.
Esenowo ga-enwe ike iji na-achọpụta magburu collections metụtara obodo. Si France Roman na ochie akpọkwa na-edebe ihe ochie. Ikike icheta si French mgbanwe ọtụtụ ụdị eserese, ọkpụkpụ, ngwá ụlọ na nkà ihe si dị iche iche oge nke oge!
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na obodo nke Paris na ịhụnanya na-eme ka onwe gị ma ọdịbendị na onwe, you will thoroughly enjoy the Musee Carnavalet! Ị ga-tụrụ site na ya dị oké ọnụ ahịa collections, ya ije, na ikuku, na nwere na-ahụkarị nke Paris!
Ọ bụ naanị m, ma ọ bụ oge ọ bụla onye kwuru Notre Dame, M nnọọ na-eche nke Victor Hugo-agaghị echefu echefu Hunchback nke Notre Dame? Ma ị na-ahụ n'anya nke nkiri ma ọ bụ na, a katidral bụ onye nleta. Ọ bụghị nanị na ọ bụ a badass ochie Catholic Katidral, ma ọ bụ na-kasị mma ihe atụ nke French Gothic ije si!
The ugegbe windo (Ichi na Rose Window), na ojiji nke ụkpụrụ ụlọ nkọwa dị ka na-efe efe buttresses na ọkpụkpụ ka a a ga-ahụ free Paris ahụmahụ. N'ihi na nke kacha mma foto ohere si Cathedral ịrị mgbịrịgba elu maka a nnụnụ anya anya nke Paris. N'ihi na a na-ele nke Katidral onwe ya, Square Jean XXIII na-enye a ezi eleghachi anya azụ na-a n'azụ echiche nke mara mma ncheta. Best of niile? Ọ bụ na anyị 10 Free Ihe ime na Paris. Gịnị? I kwutere ya. Ọ bụ free!
3. Best Free ihe na-eme Na Paris: The arụsị
Nke a ụlọ mara mma mbụ e wuru dị ka a ebe ofufe. Otú ọ dị, n'oge ọ na a ghọrọ ka a mausoleum. Ọ esetịpụ foduru nke ọtụtụ ọwọrọiso Paris; Victor Hugo, Marie Curie, Alexandre Dumas ka aha ma a ole na ole! The Pantheons iconic silhouette na dome na-n'elu ugwu na-ahụ n'elu nke Montagne Sainte Nnaji, akụkọ ihe mere eme n'ugwu nke Latin Nkeji iri na ise.
Site April ka October, njem nleta nwere ike ịnụ ụtọ ezi echiche nke isi obodo si veranda nwere ogidi nke dome. The Neoclassical ije dị reminiscent nke arụsị na Rome. Ịbụ lie ya arụsị a na-ewere otu nke kasị elu ukpono onyere na a nwa amaala. Ihe ahụ e dere n'elu mgbidi n'ọnụ ụzọ ili ozu na-agba agba na nke a mmetụta. Iji oké mmadụ, na ekele n'ala nna.
Mgbe i nwere ike gaa na maka free? Chere na ị dịghị mgbe ọ ga-ajụ! Nweta free mbanye ọ bụla mbụ Sunday nke ọnwa si 1 November ka 31 March. Free n'ihi na ndị na n'okpuru 26 si mba n'ime European Union, nakwa dị ka isi na sekọndrị nkụzi. Free maka nkwarụ ọbịa na ihe so onye, nakwa dị ka-achọ ọrụ n'ọrụ na ndị na-anata French obodo uru. Ọ bụkwa free na-eto eto na ụmụ.
Ọzọkwa nso egbupụsị m Free Ihe ime na Paris N'ihi Free ndepụta. Ije ije ogologo Canal St Martin! Nke a foduru m otu n'ime ọkacha mmasị na-ejegharị n'obodo a. A nwoke mere waterway, Ọwa Mmiri bụ banyere 4.5 km ogologo, ejikọta Canal de L Ourcq na Seine. Na mbụ wuru na 1802 site Napolean dị ka ihe si na nzube nke Ourcq River, aiming wetara potable mmiri ọṅụṅụ na Paris riddled na nwere ọrịa ndị dị ka ọrịa ọgbụgbọ na ọnyụnyụ na ọnyụnyụ ọbara na.
Kwa afọ iri na ise ma ọ bụ otú ahụ ka kanaal na-dredged hichaa ya ma na-adịbeghị anya n'oge na ebe ya onwe ya gbara ya gburugburu na kanaal agbanweela revitalization. Chọta a-arụ ọtụtụ pubs na nkpọrọ mgbasa tinyere kanaal. Nke a na ebe bụkwa a na-ewu ewu ikowe nke na-amụrụ bi. Na-ewu ewu omenala, Ọwa Mmiri ebe na-apụta na sinima Amélie dị ka ebe a na-ikwu nkume.
Marseilles ka ọnụ ahịa ụgbọ oloko nke Lyon
Ọnụ ahịa Paris ruo Lyon Train
5. Best Free ihe na-eme Na Paris N'ihi Free: Des Buttes Chaumont Park
Mbụ anyị park na anyị 10 Free Ihe ime na Paris ndepụta! Nke a mara mma mepere emepe park emi odude ke n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Paris. Atụmatụ a green park iso nke wuru ọdọ na placidly igwu ọbọgwụ, a nkume agwaetiti Central ka ọdọ-akpọ ile de la Belvedere, Temple nke Sibyl (na ebe nchekwa nke ndị Rom oge ochie Temple nke Vesta na Tivoli) n'elu ugwu abua na iri mita n'elu ọdọ. Find àkwà mmiri ejikọta agwaetiti ndị ọzọ nke ogige, a Central-eme mkpagharị na-eje ije, na-esetị green lawns.
Ọzọ super ama ebe nleta na bụ, n'ezie, free! A Mmeri Njiko, n'ike mmụọ nsọ nke Roman Njiko nke Titus, a ncheta ememe ncheta ndụ nke French mba onye agha na French Revolutinary War na Napoleonic Wars. N'okpuru Arc ụgha Ili nke Unknown Soldier nke Agha Ukwu na e ji ebighị ebi ire ọkụ nke e-ere ọkụ kemgbe nkwekorita Day na 1921. Six nnọọ mkpa tụrụ icho mma facades ọ bụla e sere isi oge nke Revolutinary na Napoleonic War. Ha na-agụnye General Marceaus olili, na Mgba nke Austerlitz, Arcole, Jemappes, na Aboukir, na Fall of Alexandria.
Inweta Ihu Ọma ohere ka ị na-elele ikpo okwu na ịhụ Arc nso ka na-eri ego ma a na-ele ma ọ bụ snapshot nke a nnukwu ihe ncheta si Champs Elysees ma ọ bụ a na-ekesa bọs ma ọ bụ ụgbọ ala bụ nnọọ free.
7. Best Free ihe na-eme Na Paris: Parc Monceau
Nke a bụ a ọha ogige na mbụ e nwetara site Duke nke Chartres. Ọ bụ nwa nwanne nna nke King Louis XVI. The ogige e mere yiri ihe English Garden site Louis Carmontelle. E nwere ọtụtụ pụtara ìhè ụkpụrụ ụlọ atụmatụ na amara n'ogige. Ha na-agụnye a obere rotunda na isi ogige ụzọ ámá, a miniature Ijipt oge ochie pyramid, a Roman veranda nwere ogidi, a Chinese nkera, a Dutch windmil na ndị ọzọ na curiosities si gburugburu ụwa. Na ịga na ogige bụ ka ịga na omenala ebube nke ụwa niile na miniature.
8. Free Fashion egosi Mgbe Galeries La Fayette
Ị chọrọ ịmata banyere ihe bụ ọhụrụ na-eme na style isi obodo nke ụwa? Mgbe ahụ adịghị uche ohere ịga otu nke free ejiji egosi ẹkenịmde ke Galeries la Fayette, Friday ọ bụla na 3 pm. Jide n'aka na ị na-eme gị ndoputa online, n'ọdịnihu iji hụ nnweta na chọrọ ụbọchị. Ọzọkwa, ọzọ magburu onwe free ọrụ, ma ọ bụrụ na ị na-Galeries la Fayette, bụ ịga ụlọ Ofel n'ihi na otu onye nke kasị mma echiche nke Paris. Ime ụfọdụ window zụọ ahịa e mesịa na shopping Egwulegwu onwe ya, ma ọ bụrụ na ị ga-enwekwu oge.
9. Open Air Cinema Mgbe The Parc De La Villette
Nke a ghota nke Free ihe na-eme na Paris bụ nile n'afọ, ma i nwere ike na-enwe n'èzí sinima n'ime ọnwa July na August (Thursday na Sunday) na otu nke obodo kasị ukwuu ogige. The ngosi ndị ịdị iche iche site classic sinima na ihe dịkọrọ ndụ movies. AKWỤKWỌ a oche oche na-akwadebe maka ụfọdụ cinematic ụtọ ka anya dị ka ọ na-akawanye ọchịchịrị.
10. Watch The Free Light Gosi Mgbe The eiffel tower
na ọchịchịrị, ọ bụla hour na hour maka nkeji ise na eiffel tower na-egbuke egbuke ma na-enye ìhè show niile abịa ekiri, a ga-anọgide na-ude de la ude nke Free ihe na-eme na Paris. The Place du Trocadero ga-enye gị ihe kasị mma oche maka show na obodo.
Montpellier na Marseilles Ụgbọ oloko
Toulouse na Marseilles Ụgbọ oloko
Njikere ịzọpụta gị obere akpa ụfọdụ Euro? Great! Gbaa ụgbọ okporo ígwè na-adịghị n'etiti Free ihe na-eme na Paris, Otú ọ dị, mgbe ị na-eji Save A Train ha n'ihi na n'aka bụghị oké ọnụ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Free ihe na-eme Na Paris” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffree-things-paris%2F የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)